Kushambadzira Kubata: Kunakidzwa neVhidhiyo | Martech Zone
Kuvaka chikuva chemabhizimusi kublogi pairi kungobudirira chete kana ivo vatengi vachiwedzera chikuva. Isu tinoziva vatengi vedu vaizobudirira mukuwana kudzoka kune investment kana isu taigona kungoita kuti vagadzire uye vagovana zvimwe zvinyorwa nezve zvigadzirwa zvavo nemasevhisi.
Kushandiswa kwepuratifomu kunoda kuti software sekambani yebasa ive nezano rekuona mashandisirwo. Kubva pane boardboard kuburikidza nekuongorora mashandisirwo, chikuva chinofanirwa kunge chiri kutarisa kuti uve nechokwadi chekuti uri kunyatso shandisa chikuva. Zviri nyore ... mashandisiro anotungamira kumhedzisiro, mhedzisiro inotungamira kudzoka kune kudyara, uye kudzoka pane kudyara kunotungamira mukuvandudzwa kwevatengi nekuwedzera.
Patakaona kunyura mukushandisa kwedu, takagadzira zvekugadzira kuti tiuye nemushandirapamwe weemail uyo waisanganisira mavhidhiyo asina kugadzirwa uye ewacky kutora vatengi vedu.
Kana iwe uchizosiya kuzvininipisa kwako pamusuwo, iwe unogona zvakare kutumira nezvazvo. Isu tanga tichiita zvakadzama re-kubatanidzwa mishandirapamwe yevatengi vane yavo yemukati kugadzirwa yanga isipo.
Isu takaburitsa zviteshi zvese ndokumbotandara nemamwe mavhidhiyo evatengi vedu. Iwo akanyorwa achishandisa iPhone, iMovie, uye emhando dzekuterera maturu. Takazvigadzira zvese pazuva uye ndokuzvisundidzira kunze!
Kunakidzwa Kwekushambadzira Vhidhiyo: Ndokumbira utumire!
Mushure mevhiki rimwe chete, mhedzisiro yacho yaive yakanaka kune vazhinji vedu vatengi, saka takavasiya email nhasi kuti vavatende.
Kunakidzwa Kwekushambadzira Vhidhiyo: Iwe Yakatumirwa, Doug Akaponeswa!
Uye zvechokwadi, vatengi vedu vasina kukwira kundiro vakagamuchira imwe meseji.
Kunakidzwa Kwekushambadzira Vhidhiyo: Hauna Kutumira, Doug HAASI Akachengetedzwa!
Kuzivisa: Ini ndiri mugovani uye mubati-muvambi weCompendium Blogware.
Tags: BloggingkuenderanaiPhonekurudzirosaasvhidhiyo kubatanidzwavhidhiyo rwendomavhidhiyo
Appirio Inobatanidza Salesforce uye Facebook
Mira Kuparidzira Social Networks Kumabhizinesi
Kukadzi 3, 2009 na6:45 PM
Kukadzi 3, 2009 na6:49 PM
And my apologizes for the lockup :), I am one of those who are supposed to write for Sigma Micro’s Ecommerce Gurus – Compendium blog and embarrassingly haven’t yet!.
Kukadzi 3, 2009 na8:49 PM
What is it going to take to get you pumping out some posts? I mean that sincerely – would love your feedback!